ऊर्जा उद्योगमा तनहुँ हाइड्रो - Karobar National Economic Daily
ऊर्जा उद्योगमा तनहुँ हाइड्रो
query_builderOctober 4, 2017 9:25 AM supervisor_accountभोला शर्मा visibility1049
कुल १ सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना प्रदेश नं. ४ अन्तर्गत तनहुँ जिल्लामा पर्छ । यो नेपालको कुलेखानीपछिको दोस्रो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना हो ।
आयोजनाको पावरहाउस तनहुँ जिल्लाको ऋषिङ गाउँपालिकामा पर्छ भने व्यास नगरपालिका, भिमाद नगरपालिका, ऋषिङ गाउँपालिका र म्याग्दे गाउँपालिका गरी जम्मा चारवटा स्थानीय निकाय आयोजनाको जलाशय प्रभावित क्षेत्रमा पर्छन् । १ सय ४० मिटर अग्लो बाँध बनाई झन्डै २५ किमि लम्बाइमा समुद्री सतहको ४ सय १५ मिटर माथिसम्म सेती नदीको पानीलाई जलाशय बनाएर यो आयोजना निर्माण गर्न लागिएको छ । हाल आयोजनाको मुख्य निर्माण कार्यका लागि ठेकेदार चयन गर्ने कार्र्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
आयोजनाको आवास निर्माण तीव्र गतिमा सञ्चालन भएको छ भने पहुँच मार्ग स्तरोन्नति पनि दु्रत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । टेस्टिङ टनेल (करिब ३ सय) मिटर निर्माण गर्ने कार्य पनि सम्पन्न हुन लागेको छ । आयोजनामा पर्न सक्ने जटिलतालाई न्यूनीकरण गर्दै समन्वय, सहकार्य, सहभागिता र परामर्श कायम गर्दै अगाडि बढ्न स्थानीय परामर्श मञ्च गठन गरिएको छ ।
उक्त मञ्चमा प्रभावित स्थानीय निकायको प्रमुख संयोजक र तनहुँ हाइड्रोपावर प्रोजेक्टका प्रतिनिधि कर्मचारी सदस्य–सचिव रहन्छन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रहरू व्यास र भिमाद नगरपालिका तथा म्याग्दे र ऋषिङ गाउँपालिकामा उक्त मञ्च गठन गरिएको छ । मञ्चको कामकारबाही सकारात्मक र रचनात्मक मात्र होइन, कार्यान्वयनशील र ग्रहणशील पनि हुनेछ । कार्यसम्पादनका क्रममा देखिने स्थानीय तहका उल्झनहरूलाई यसै मञ्चले व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नेछ ।
मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले जलाशय डुबानमा पर्ने जग्गा, संरचना, फलफूल तथा रूख बिरुवाहरूको मुआब्जा निर्धारण गरिसकेको छ र मुआब्जा वितरण पनि धमाधम भइरहेको छ । हालसम्म करिब ७५ प्रतिशत मुआब्जा वितरण भैसकेको अवस्था छ ।
कुल ५ सय ३४ कित्तामा झन्डै १२ सय रोपनी जग्गाको रु. ६० करोड, फलफूल तथा रूखबिरुवाको झन्डै ५ करोड र घर, गोठलगायतका संरचनाहरूको ५ करोड गरी जम्मा रु. ७० करोड मुआब्जा वितरण गर्न तनहँु हाइड्रो साइट कार्यालयका कर्मचारी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तनहँुका कर्मचारीहरू क्रियाशील छन् ।
स्थानीय चलनचल्तीको मूल्य, जग्गाको उपयोग र जग्गाको विद्यमान अवस्थासमेतलाई ध्यानमा राखी मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो । निर्धारित मुआब्जा १२ तहमा प्रतिरोपनी न्यूनतम रु. २ लाखदेखि अधिकतम रु. ८ लाखसम्म छ ।
दर्ता नभएका ऐलानी जग्गामा परापूर्वकालदेखि भोग चलन गर्दै आएका र उक्त जग्गामा घर निर्माण गरी बसेका परिवारलाई अन्यत्र कहींकतै घरजग्गा नभएमा र सोको प्रमाण पेस गरेमा उक्त घरधनीलाई घडेरीबापत एकमुस्ट रु. ४ लाख अतिरिक्त रकम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
आयोजनाका विभिन्न संरचनाको निर्माण क्षेत्रका लागि सम्पूर्ण जग्गा तथा घर अधिग्रहणमा परी विस्थापित हुने र अन्यत्र कहीं–कतै घरजग्गा नभएका विस्थापितहरूले सोको प्रमाण पेस गरेमा ५ रोपनीभन्दा कम जग्गा हुने परिवारलाई थप रु. २ लाख ५० हजार एकमुस्ट थप रकम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
त्यसैगरी यस आयोजनामा एसियाली विकास बैंकको लगानी रहेको हुनाले उक्त बैंकको सुरक्षण नीतिअनुसार आयोजनाबाट विस्थापित हुने घरपरिवारका लागि प्रतिपरिवार रु. २ लाख १५ हजार थप रकम उपलब्ध गराइएको छ । यसका साथै ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, जनजाति, गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवार, दलितजस्ता जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेकाहरूलाई एकमुस्ट रु. ५५ हजारका दरले उपलब्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
आगामी दिनहरूमा स्थानीय प्रभावितहरूका लागि सडक, खानेपानी, झोलुङ्गे तथा मोटरेबल पुल, शवदहन घाट निर्माण गरेर स्थानीय जनजीवनलाई सहज, सुगम र प्रभावकारी बनाइनेछ । त्यसैगरी आयोजनामा जनशक्ति आवश्यक परेका बखत रोजगारीका लागि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई प्राथमिकता दिइने नीति छ । स्थानीयवासीहरूको विगतको फिसिङ कार्यलाई प्रभावित हुन नदिन पछि बन्न जाने विशाल जलाशयमा माछापालन व्यवसायलार्ई थप प्रोत्साहित गर्न फिसरी स्पेसलिस्ट अर्थात् माछाविज्ञको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
सोअनुरूप हाल सेती र मादी नदीको क्षेत्रमा पाइने माछाहरूको अध्ययन गर्ने कार्य पनि अगाडि बढिरहेको छ । साँच्चिकै आयोजनाबाट स्थानीयवासीहरूले बढीभन्दा बढी लाभ लिन पाउँछन् । ऊर्जा र पर्यटकीय दृष्टिले त आयोजना धेरै नै लाभदायक छ । विशेष गरी तनहँुवासीको घरआँगनमा हुर्कन लागेको यो नमुना परियोजना साकार पार्न तनहँुवासी, तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेड, राजनीतिक शक्तिहरू, ऊर्जा मन्त्रालयलगायत यसका लगानीकर्ताहरू नेपाल विद्युत् प्रधिकरण, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र युरोपियन लगानी बैंक (ईआईबी) को थप सक्रियता जरुरी छ ।
तनहँु हाइड्रोपावर प्रोजेक्टले गर्दा तनहँु जिल्लाको आकर्षण बढ्न थालेको छ । आयोजनाको मुख्य निर्माण कार्य सुरु भएपछि यसले थप तीव्रता पाउनेछ । साथै, उक्त निर्माण कार्य यसै वर्षको अन्त्यबाट सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि नजिकैको पर्यटकीय नगरी पोखरा, बन्दीपुर र तनहुँसूर आउने पर्यटकहरू एकपटक तनहँु हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट र यसको विशाल जलाशय दृश्यावलोकन गर्न त्यहाँ अवश्य पुग्नेछन् ।
पृथ्वी राजमार्गमा ओहोरदोहोर गर्ने यात्रुहरू एकपटक तनहँु झरेर हाइड्रोको अवलोकन गर्न आतुर हुनेछन् । होटल, रेस्टुराँ, बोटिङ, ¥याफ्टिङलगायतका व्यवसायमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूको आकर्षण बढेर समग्र तनहँु जिल्ला साँच्चीकै सुनको टुक्का बन्ने अपेक्षा गरिन्छ ।
‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ’ भनेझैं मुलुकले जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने रणनीतिक उपाय खोजिरहेको सन्दर्भमा तनहँु हाइड्रो (१ सय ४० मेगावाट) पिकिङ रन अफ रिभर प्रकृतिको एउटा नमुना उदाहरण बन्न सक्ने देखिन्छ । उत्पादित विद्युत्लाई दमौली–नारायणगढ २ सय २० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनमार्फत भरतपुर सबस्टेसनको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने भएको छ ।
सोका लागि वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षणसम्बन्धी कार्य र ठेकेदार चयनका लागि बोलपत्र आह्वान हुने कार्य बाँकी नै रहेको छ । तथापि सर्वेक्षण र डिजाइन निर्धारणको काम भने सम्पन्न भइसकेको छ ।मानवीय साधनको विद्यमान ज्ञान, सीप, दक्षता, प्रवृत्ति, मनोवृत्ति अनि व्यवहारमा वाञ्छित सुधार ल्याउन सञ्चालन गरिने विशिष्ट कार्यक्रम तालिम हो । यसले मानिसलाई एक छाक टार्न माछादिने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी माछा मार्ने कला सिकाउने जमर्को गर्छ ।
यस मान्यतालाई आत्मसात् गरी तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले आगामी पाँच वर्षभित्र करिब १ हजार जना प्रभावित व्यक्तिलाई सीप विकास तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पहिलो चरणमा वि.सं. २०७४ कात्तिक १५ गतेबाट २०/२० जनाका दरले ६० जना प्रत्यक्ष प्रभावितलाई म्यासन, प्लम्बिङ र हाउस वायरिङको तालिम प्रदान गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरी दरखास्त संकलन गरिरहेको छ ।
तालिम सिटिइभिटीअन्तर्गतको तनहुँ प्राविधिक शिक्षालय, भिमादबाट सञ्चालन गरिने भएको छ । प्रभावित परिवारको उन्नति, प्रगति र विकासमा आयोजना गम्भीरतापूर्वक अग्रसर रहेको छ । सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक अनि वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएको यो आयोजना मुलुकको सबैभन्दा बढी सुगम ठाउँमा रहेको छ ।
आयोजनालाई बिनाअवरोध समयमै सम्पन्न गरी मुलुकको ऊर्जा उद्योगमा टेवा पु¥याउन सम्बद्ध पक्ष, आयोजनाद्वारा नवगठित स्थानीय परामर्श मञ्च र सरोकारवाला नागरिकको प्रभावशाली क्रियाशीलता जरुरी छ ।
(लेखक तनहुँ हाइड्रोपावर प्रोजेक्टका प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।)
ऊर्जा तनहुँ हाइड्रो